आजको डिजिटल संसारमा, हामी सबैले वेबसाइट सुरू गर्ने, अनलाइन उपस्थिति सिर्जना गर्ने र साइट आगन्तुकहरूलाई भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्ने फाइदाहरूको बारेमा सुनेका छौं।
वेबसाइट सुरू गर्नु उत्साहजनक छ तर यो व्यापार अनलाइन बढावा दिनको शुरुवात मात्र हो। यो खोज ईन्जिनमा फेला पार्न सकिन्छ र Google परिणामहरूको शीर्षमा पुग्ने कुरा पक्का गर्दै कडा परिश्रम साँच्चै सुरू हुन्छ।
यहाँ तपाईंको लागि छिटो कथा छ। यो एक व्यवसाय मालिकको बारेमा हो जुन यसको सेवाहरु र उत्पादनहरु लाई प्रमोट गर्न एक महीनाको वेबसाइट र चमकदार नयाँ वेबसाइटमा राख्दछ। उत्तम प्रयास र यातायातलाई बढावा दिन प्रयासहरूको बाबजुद, वेबसाइट खोज इन्जिनको तल्लो स्थानमा रह्यो र लगानी बिक्रीमा वृद्धिमा परिवर्तन हुन सकेन।
परिचित ध्वनि? धन्यबाद, यो त्यस्तो हुनु हुँदैन। एसईओ र वेबसाइट विश्लेषक को उपयोग संग, एक वेबसाइट रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि यो अनलाइन खोज मा शीर्ष स्पॉट हिट हुनेछ।
जीवनको प्रायः चीजहरूको रूपमा, थोरै विशेषज्ञता लागू गर्दा लामो यात्रा गर्न सक्दछ जब यो एसईओको कुरा आउँछ। जिममा एक्लै काम गर्ने वा व्यक्तिगत ट्रेनरसँगको भिन्नताका बारे सोच्नुहोस्। परिणामहरू जहिले पनि उत्तम, चाँडो र लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ जब ट्रेनरको साथ काम गर्दा। समान दृष्टिकोण एसईओ र मार्केटिंग विज्ञहरूको समर्थन सूचीबद्ध गरेर एक सफल अनलाइन उपस्थिति सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाइँको व्यवसायलाई खोज ईन्जिन स्तरको माध्यमबाट माथि उठाउन मद्दत गर्न।
Semalt त्यस्ता विशेषज्ञहरूको टोलीले निर्माण गरेको हो र विश्वभरका ग्राहकहरूलाई उनीहरूको अनलाइन प्रोफाइल एक दशक भन्दा बढि बढाउन मद्दत गर्दैछ। तिनीहरू को हुन् र उनीहरू के गर्छन् हेर्नुहोस्।
संक्षेपमा, Semalt एक पूर्ण स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी हो अनलाईन व्यवसायहरू सफल बनाउनको लागि। किभ, युक्रेनमा मुख्यालयको साथ, Semalt ले एसईओ पदोन्नति, वेब विकास र उन्नत एनालिटिक्स सेवाहरू प्रदान गर्ने, साथै व्याख्याकर्ता भिडियो सामग्री सिर्जना गरेर विश्वव्यापी ग्राहकहरूसँग काम गर्दछ।
Semalt १०० भन्दा बढी रचनात्मक आईटी र मार्केटिंग पेशेवरहरूको टोली हो - साथै निवासी पालतू टर्बो टर्बो - उनीहरूको जरामा दृढतापूर्वक डिजिटल टेक्नोलोजीमा राखिन्छ। सँगै काम गरेर र वर्षौंको विशेषज्ञता साझेदारी गरेर, Semalt टोलीले ग्राहकलाई अनलाइन स्थितिको सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँमा पुग्न मद्दत गर्न एक मूल SEO समाधान सिर्जना गरेको छ - गुगल खोजी परिणामहरूको शीर्ष।
इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सबैले थाहा पाउनेछन्, खोज इन्जिन नतिजाको शीर्ष स्पटहरूमा देखा पर्ने अनलाइन सुन हो। यसले न केवल दृश्यता बढाउछ र वेब ट्राफिकलाई बढावा दिन्छ, तर अनलाईन व्यवसायका लागि यसले अधिक सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने र बिक्रीमा बृद्धि हुन सक्छ।
त्यसो भए यो कसरी काम गर्दछ? सामान्यतया, त्यहाँ दुई विकल्पहरू छन्: AutoSEO र FullSEO। तर पहिलो, तपाईं तिनीहरू मध्येकाको अझै पनि SEO को अर्थ बारे निश्चित हुनुहुन्न, यहाँ एक सानो क्र्यास कोर्स छ।
SEO खोज ईन्जिन अनुकूलन को अर्थ हो। यसको मतलब यो हो कि गुगल जस्ता खोज ईन्जिनहरूले तपाइँको लेख, ब्लग, वा वेबसाइट अनलाइन सामग्रीको भीडले भरिएको संसारको बीचमा फेला पार्न सक्दछन् र यसलाई उनीहरूको खोज परिणाममा राख्छन्। अधिक अनुकूलित सामग्री खोजी ईन्जिन एल्गोरिदमहरूको लागि हो, तब परिणाममा यो माथि देखा पर्नेछ।
यो सरल देखिन्छ तर खोज इञ्जिनहरूले नियमित रूपमा तिनीहरूको एल्गोरिदम परिवर्तन गर्दछ, जसको मतलब गत वर्षले काम गरेको हुन सक्छ, यस बर्ष त्यति प्रभावकारी हुने छैन। त्यहाँ अनगिन्ती लेखहरू अनलाइन उपलब्ध छन् कसरी सुझावहरूको साथ एसईओ अनुकूलन गर्न को लागी, तर एक सबैभन्दा प्रभावी उपकरण को एक वेबसाइट भर प्रासंगिक कुञ्जी प्रयोग गरेर हो। त्यसो भए, तपाईं मेटा ट्यागहरूको बारेमा सोच्न चाहनुहुन्छ, हेडलाइन्स र छविहरू अनुकूलन गर्नुहोस्, लिंक निर्माण र अद्वितीय सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्।
माथिका सबैमा समय र योजना लिन्छ, र धेरै व्यवसाय मालिकहरूको लागि समय अनमोल हुन्छ (वा कहिलेकाँही दुर्लभ वस्तुहरू)। त्यहि ठाउँमा AutoSEO र FullSEO जस्ता सेवाहरूले मद्दत गर्न सक्दछन्।
AutoSEO साना व्यवसायहरूको लागि डिजाइन गरिएको एक उपकरण हो जुन साइट ट्राफिक बढाउन चाहान्छ तर SEOसँग परिचित हुन सक्दैन र उनीहरूले वास्तविक नतिजाहरू नदेखे सम्म ठूलो लगानी गर्न चाहँदैनन्।
सेवा वेबसाइटको वर्तमान स्थितिमा एक संक्षिप्त रिपोर्टको साथ शुरू हुन्छ, त्यसपछि एसईओ विशेषज्ञ द्वारा पूर्ण विश्लेषणको साथ त्रुटिहरू पत्ता लगाउन र गर्न सकिने सुधारहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। एक एसईओ ईन्जिनियर तब ट्राफिक-उत्पादित कीवर्डहरू छनोट गर्दछ जुन वेबसाईटसँग प्रासंगिक हुन्छ र व्यापारले यसलाई बढावा दिन्छ। अर्को, Semalt को टेक्नोलोजी को आला-सम्बन्धित वेब संसाधनहरु को लागी लिंक निर्माण शुरू हुन्छ, डोमेन युग र गुगल ट्रस्ट रैंक अनुसार चयन गरिएका साइटहरु संग।
एक पटक उपकरणहरू एक ठाउँमा भएपछि, Semalt ले ग्राहकलाई कसरी दैनिक पदोन्नतीहरू जनाउँदछ प्रवर्तन गरिएको कुञ्जी शृ ranking्खलाहरू, र नियमित विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू अभियानको प्रभावकारिताको आकलन गर्न प्रदान गर्दछ।
फुलसेओले ठूला व्यवसायका लागि, धेरै कम्पनीहरूका व्यक्तिहरू, वा वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्न र एसईओको उपयोग गर्न अलि बढी पैसा लगानी गर्न तयार हुनेहरूको लागि एकीकृत एसईओ समाधान प्रदान गर्दछ।
पूर्णसेवा सेवाले AutoSEO लाई समान सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्दछ, तर प्रस्तावित समाधानहरू गहन विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्, प्रतिस्पर्धीहरूको समीक्षा सहित, र उच्च रूपान्तरण दरको साथ महत्वपूर्ण वेबसाइट ट्राफिक वृद्धिको ग्यारेन्टी गर्दछ। यो मूलत: गुगल खोजी परिणामहरूको शीर्षमा एक वेबसाइट पठाउन उपकरण हो - छिटो।
फुलएसईओ प्रयोग गरेर, Semalt को टीमले सुनिश्चित गर्दछ कि वेबसाइट पूर्ण रूपमा SEO मापदण्डको अनुपालन गर्दछ। यो साइटलाई आन्तरिक रूपले अनुकूलन गरेर र त्रुटिहरू फिक्सिंग द्वारा गरिन्छ, जस्तै किवर्डहरूको लागि मेटा ट्यागहरू सिर्जना गर्ने, वेबसाइट HTML कोड सुधार गर्ने, टुटेका लिंकहरू हटाएर वेबसाइट अन्तर्क्रिया बढाउँदै। फुलसेओ प्याकेजको अन्य फाइदाहरूमा वेबसाइट विकास र एसईओ मैत्री सामग्रीको सिर्जनाको लागि Semalt बाट पूर्ण सहयोग समावेश छ। परिणाम लगानी र दीर्घकालीन परिणामहरूमा सकारात्मक प्रतिफल हो।
जस्तो कि तपाईंले सायद अनुमान गर्नुभएको छ, Semalt को SEO सेवाहरूको पछाडि कुञ्जी भनेको प्रत्येक ग्राहकको लागि एक अद्वितीय समाधान सिर्जना गर्न विश्लेषणको प्रयोग हो। जे होस्, शब्द "वेबसाइट विश्लेषक" ले भ्रम पैदा गर्न सक्छ, त्यसैले हामी यसको मतलब के हो समीक्षा गरौं र कसरी प्रक्रिया Semalt मा प्रयोग हुन्छ।
वेबसाइट एनालिटिक्स के हो?
वेबसाइट एनालिटिक्स एक उपकरण हो जुन अनलाईन मार्केटिंगको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न प्रयोग गरिन्छ, साथै तपाईंको व्यापार र प्रतिस्पर्धाहरूको बजार स्थिति ट्र्याक गर्दछ।
व्यापार बजार को पूर्ण दायरा बुझ्नको लागि नियमित अनुगमन आवश्यक छ। यसले एसईओका लागि सान्दर्भिक कुञ्जीशब्दहरू स्थापित गर्न र प्रतिस्पर्धीहरूको प्रदर्शनमा नजर राख्न मद्दत गर्दछ, तर यसले क्षेत्रीय आधारमा ब्रान्ड विकासको लागि ताजा अवसरहरू, वा उत्पादन वितरणको लागि नयाँ अवसरहरू पनि पहिचान गर्न सक्दछ।
Semalt प्याकेजले वेबसाइटको वृद्धि ट्र्याक गर्न र कुनै पनि सम्भावित अवरोधहरू पहिचान गर्नका लागि आवश्यक सबै विश्लेषणात्मक डाटामा पहुँच प्रदान गर्दछ। यसले वास्तविक-समय रैंकिंग अद्यावधिकहरू, परिणाम प्रस्तुत गर्नका लागि सेतो-लेबल रिपोर्टहरू र Semalt एपीआई मार्फत वैकल्पिक डाटा अपलोड समावेश गर्दछ। यो कम लागत पनि हो तर एसईओ रणनीतिहरू सूचित गर्न मद्दतको लागि उपयोगी अन्तरदृष्टि उत्पन्न गर्दछ। वेबसाइट एनालिटिक्सको प्रयोग एसईओ पजलको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो र विशेषज्ञको सहयोगमा यो साइटलाई एक प्रभावकारी व्यापारिक उपकरणमा रूपान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
खुशी Semalt ग्राहकहरु
Semalt ले 5,000,००० भन्दा बढि वेबसाईटहरूमा काम गरिसकेको छ र ग्राहक सूची स्वास्थ्य र स्वास्थ्यदेखि टेक्नोलोजी र सम्पत्ती सम्मका व्यवसायहरूको साथ संसारभरि फैलिएको छ। धेरै खुसी ग्राहकहरूले Semalt लगातार Google र Facebook मा शीर्ष समीक्षा प्राप्त गर्दै सकारात्मक परिणाम रिपोर्ट गरेका छन्।
त्यस्तै एक खुशी ग्राहक एक कच्चा मह र मह उत्पादनहरूमा विशेषज्ञता युके आधारित अनलाइन रिटेलर हो। उद्देश्य कम्पनीलाई गुगलमा शीर्ष १० स्थानमा ल्याउने र वेबसाइटमा जैविक यातायात बढाउनु थियो। फुलसेओ सेवा प्रयोग गरेको months महिनामा, ट्राफिक 4,8१० प्रतिशतले वृद्धि भयो, मासिक वेबसाइट भ्रमणहरू १२,4११ ले वृद्धि भयो र गुगल टॉप -१० मा कुञ्जी शब्दहरूको संख्या १ 14 10 बाट बढेर १०,549 to पुगेको छ। ग्राहकलाई गुगलको "ब्यक्ति पनि सोध्नुहोस्" बक्समा चित्रित गरिएको थियो, अगाडि साइटमा जैविक ट्राफिकलाई बढावा दिँदै।
Semalt कसरी गरे? परिणामहरू सुधार गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न गहन टेक्निकल अडिटको साथ सुरू गरेर हासिल गरिएको हो। अडिट पछाडि वेबसाइटलाई पुन: सुधार गर्ने रणनीति पछ्याईयो, जस्तै PageSpeed लाई अप्टिमाइज गर्ने, वेबसाइटको पुनर्गठन र SEO सामग्री निर्माण। त्यस पछि, Semalt एक उन्नत लिंक निर्माण अभियान मार्फत वेबसाइटलाई FullSEO प्याकेजको भागको रूपमा प्रचार गर्न सुरू गर्‍यो। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
खुशी Semalt ग्राहकहरु को अधिक केस अध्ययन को लागी, वेबसाइट यहाँ हेर्नुहोस्।
अब जब SEO र वेबसाइट एनालिटिक्स वर्णन गरिएको छ, Semalt को साथ काम गर्नु जस्तै के हो?
पहिले, Semalt एक ग्लोबल कम्पनी हो त्यसैले साझा भाषा पत्ता लगाउन कुनै समस्या छैन। टोलीका सदस्यहरूले अ English्ग्रेजी, फ्रेन्च, इटालियन र टर्की बोल्छन्।
दोस्रो, AutoSEO को साथ सुरूवात १ just-दिनको परीक्षणको साथ केवल $ ०.99। को लागि सजिलो छ। यो एक महिना, तीन महिना, छ महिना वा एक वर्ष चलाउन योजना छनौट गर्न विकल्पको साथ अनुगमन गरिएको छ। यो एक राम्रो तरीका हो सेवा को नमूना को लागी FullSEO मा हाम फाल्नु भन्दा पहिले।
अन्तमा, Semalt ले ग्राहक समर्थन २//7 प्रदान गर्दछ, यसको मतलब यो हो कि तपाईं विश्वमा जहाँ भए पनि, मद्दत र सल्लाहको लागि टीमको सदस्यलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं टीमलाई अनलाइन पूरा गर्न वेबसाइटमा हाम्रो बारे पृष्ठमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ ।